Mia: Nyocha azụmahịa nke obodo, iguzosi ike n'ihe, na CRM | Martech Zone
Mia, site na Signpost, na-enyocha data na ọtụtụ nde ndị na-azụ ahịa iji chọta ohere ọhụrụ iji zipu ozi ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. Teknụzụ dabeere na AI a na-emepụta ozi ịntanetị na ederede nke ndị ahịa gị zara, na-abawanye ahịa gị site na 10% ma na-agbakwunye nyocha gị site na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpakpando abụọ na nkezi.
Mia na-abịakwute ndị ahịa iji hụ ma ha ga-akwado azụmahịa gị na, ọ bụrụ na ha asị ee, ọ na-agbaso ihe ncheta ịhapụ kpakpando ise na saịtị nyocha.
Site na ịnakọta ozi ịntanetị, nọmba ekwentị na data azụmahịa, Mia maara onyinye ndị ahịa gị ga-enwekarị ekele maka ya. Ndị ahịa ọhụụ na-enweta onyinye nnabata na ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe na-akwụghachi ụgwọ maka azụmahịa ha gara n'ihu. Mia ọbụna kpaliri ikere òkè na Ntuziaka mmemme kere naanị maka azụmahịa gị.
Mia na-enyocha ọrụ akaụntụ gị ma zipụ aro maka mkpọsa gị ndị ọzọ. Nwere ike iji aka gị hapụ Mia ka ọ rụọrọ gị ọrụ. Kwa izu Mia ga-enyocha ihe omume na nso nso a wee zipụ akụkọ banyere ọtụtụ kọntaktị ọhụrụ agbakwunyere, onye nyela nyocha 5-nke ndị ahịa gị laghachiri ọzọ. Ou nwere ike soro ihe ịga nke ọma gị na-agabeghị na saịtị ahụ.
Agbakwunyere Mia Akụkụ
customization - email mkpọsa, imewe na nyochaa saịtị.
nzaghachi - Sochie na lelee net net nkwado gị (NPS) gafee ebe gị niile. Nweta nzaghachi na ihe na-arụ ọrụ na ihe nwere ike ịchọ ndozi.
Mmekọrịta - Ntinye aka API na-enye gị ohere iwebata usoro nke ugbu a na nkeji.
Trazụta Trazụta - Kwado nlekota nzụta iji mechie akaghị na mbọ ahịa gị. Mmekọrịta data ga-ebuli ozi gị elu, na-enye ezi nkwukọrịta 1: 1.
Izi ozi ederede - Site na ntinye aka 8x nke email, Mia na-agwakwa atụmanya gị na ndị ahịa gị ederede.
Oge ụfọdụ ọkachamara ị chọrọ ịgwa mmadụ okwu. Ndi otu anyi di njikere inyere gi aka ma ichoro ya.
Azụmaahịa Azụmaahịa Obodo na Nsonaazụ A tụrụ Anya
Tags: azụmahịa obodoObodo azụmahịa crmobodo seomapNyocha banyere ntanetịNtụleNyocha